Dzivisa mavhidhiyo nema audios emawebhusaiti aunoshanyira kuti arege kuridzwa otomatiki Ndinobva mac
Nhasi kuchinjika kwechinhu chitsva chakaitwa mu macOS High Sierra mu Safari browser. Apple inoenderera ichishanda pakugadzira mushandisi ruzivo rweavo vedu vanoshandisa nyowani Mac system kuwedzera kupfuma. Mupfungwa iyoyo, timu yeCupertino inoziva kuti patinoshandisa makomputa avo tinogona kuve chero kupi uye humbowo hweizvi ndizvozvo vafambira mberi mukudzivirira zvemukati kana zvakasarudzwa.
Tiri kutaura nezvazvo izvozvi tinogona kumisikidza kana mavhidhiyo nemanzwi aripo pawebhu, uye izvo zvinowedzwazve otomatiki, ita kana kwete, ndiko kuti, tonga kana mavhidhiyo ekushambadza nemanzwi emawebhu atinoshanyira akaurayiwa. kana zvakadaro vanoramba vari mbeveve.
Kana iwe wakambozvibvunza kana paine nzira yekuvharira vhidhiyo uye odhiyo zvemukati zvinotambiswa otomatiki kana uchipinda mamwe mawebhusaiti, ine nyowani macOS High Sierra zvinogoneka. Icho chidiki dhizaini yatinofanirwa kuita tisati tatanga kufamba uye izvo zvinoita kuti kunyarara kuitike chero kwauri.
Maitiro ekuisa mukuita izvo zvatatsanangura zvakapusa uye ndezvekuti isu tinongofanirwa kuvhura iyo Safari browser, enda kukero bar uye kurudyi tinya. kuitira kuti imenyu inodonha ioneke patinofanira kudzvanya pane marongero ewebsite ino. Kubva pakudonha uku tinokwanisa kumisikidza akasiyana paramende kuitira kuti kana tave nezvose zvakagadziriswa tinokwanisa kufamba pawebhu zvakadzikama uye pasina zvinokanganisa.
Maitiro aya anofanirwa kuitwa pane yega yega mawebhusaiti atinoshanyira uye iwo masisitimu anoshanda kune webhusaiti yatakanyora mubhokisi re browser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Dzivisa mavhidhiyo nema audios emawebhusaiti aunoshanyira kubva pakutamba otomatiki
Pakupedzisira, Apple inowana mvumo yeData Center muIreland